Apple (iOS) မိုဘိုင်းနည်းပညာများ
flash သီချင်းများ 1
flash သီချင်းများ 2
flash သီချင်းများ 3
flash သီချင်းများ 4
gtalk custom message
English ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားများ (၁)
English ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားများ (၂)
ဂီတစက်ခန်း 1 >>
ဂီတစက်ခန်3း>>
ဂီတစက်ခန်း5>>
ဂီတစက်ခန်း7>>
ဂီတစက်ခန်း9>>
ဂီတစက်ခန်း 11 >>
ဂီတစက်ခန်း 13 >>
လပ်ကီးမြို့တော်တွင် မြန်မာသတင်း၊နိုင်ငံတကာသတင်း၊ထူးဆန်းထွေလာ၊အားကစားသတင်း၊ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ဟာသလေးများ၊ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ပြဟာသ၊ တရားတော်များ၊ဘာသာရေးကဏ္ဍ၊ချက်နည်းပြုတ်နည်း၊အလှအပနှင့်ဖက်ရှင်၊သရဲတစ္စေနာနာဘာဝ၊သိုင်းဝတ္ထုနှင့်စာအုပ်စာပေ၊gtalk custom message၊ ဗေဒင်ကဏ္ဍ၊ဗဟုသုတနှင့်အထွေထွေ..စသည်တို့ကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်....
ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ ANDROID ဖုန်း နည်းပညာများ APPLE (IOS) မိုးဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာများ ကို နည်းပညာများနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
သီချင်းဒေါင်းချင်သူမျာအတွက် အသစ်ထွက်တဲ့သီချင်းတွေရော သီချင်းဟောင်လေးတွေပါ " MP3 ဒေါင်းလုပ်" နေရာမှာ ၀င်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် သီချင်းများကို album လိုက်စုစည်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ်
ဂီတစက်ခန်း စိတ်ညစ်နေသူ...စိတ်ရှုပ်နေသူများ... စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာချင်တယ်ဆိုရင် ဂီတစက်ခန်းထဲဝင်ပြီး ၀င်ကလိလိုက်ပါ... ဂီတစက်ခန်းမှာ ဂီတာ၊ဒရမ်၊စန္ဒယား၊တယော၊ဒီဂျေ အပြင်... ရောသမမွှေနိုင်တဲ့ တီးလုံးသံစဉ်လေးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
အွန်လိုင်းဂိမ်းများကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလွယ်တကူကစားချင်တယ်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံပြင်ရန်အောက်က..အွန်လိုင်းဂိမ်းနေရာမှာ ၀င်ရောက်ကစားနိုင်ပါတယ်
11:05 AM ကဗျာများ 1 comment
"ည"တွေထဲ ဘဝတွေက သေနေဆဲ
"ည "တွေသာ မီးသဂြိုလ်စက်ထဲဝင်လို့/ထွက်လို့
"ည"တွေက တစ္ဆေ တွေလို အဖော်မဲ့
"ည"တွေထဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းသံတေ်ွပြန့်လွင့်
"ည"တွေကို ဖန်အိမ်မှာ သိမ်းထားကြ
"ည"တွေဟာ လာဗန်ဒါ ပန်းခင်းကြီးလို ခနတာလေးမဟုတ်
"ည"တွေဟာ အရပ်ရှည်နေတဲ့ အရပ်မျက်နှာများမှာကျည်ဖောက်နေကြ
"ည"တွေဟာ စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာ နိုက်ထရိုဂျင်ငွေ့တွေကိုရှူနေရ
ညတွေထဲမှာ ညတွေပဲ ရယ်နေကြ
ဖယောင်းတိုင်ကို ချစ်တဲ့ နာဇီတွေလိုမျိုး
ညတွေကို လူညတွေက တယုတယထမ်းသွားနေတုန်းပဲဆိုတာ။
အသစ်ကြိုက်သူများ(Volume 1 - 5)
10:59 AM ဒေါင်းလုပ်သီချင်းများ2comments
၁။မောင့်ကိုချစ်ရင် - Cartoon
၂။ကျောင်းသီချင်း - Cartoon
၃။စကားပုံထဲကအဖြစ်မျိုး - ဖြိုးသူ
၄။စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ - Red Energy
၅။ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် - One Way
၆။အညာသား - Snare
၇။မင်းပေးခဲ့သော - Crab Feat အောငါ Vs အိကို
၁။မုန်းပြီးရင်းမုန်း - Crab
၂။ထာဝစဉ် - OBG
၃။မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း - Force Feat နန်တောင်
၄။အသည်းကွဲဘဝမှတ်တမ်း - OBG
၅။မိုး - Crab Feat အောငါ
၆။မင်းအတွက်မှား - DNA
၁။ပုံပြင်တစ်ခု၏ပုံရိပ် - One Way
၂။ဘဝကိုပြုပြင်ဖို့ - Crab
၃။ခေတ်ရေစီးကြောင်း - One Way
၄။အဝေးထွက်သွားသူ - ရတနာမိုင်
၅။အဖြစ်သည်းသူ -2Tempo feat ရေဘက္ကဝင်း
၆။ရိုးရိုးလေးပဲလွမ်းမယ် - Peace
၇။မှားယွင်းတဲ့နေ့ရက်များ - Peace
၁။ဖြေရှင်းပေးပါ - Niggle Party
၂။မင်းလေးနဲ့တွေ့ဖို့ - Crab Feat အောငါ
၃။မေ့မရသေးဘူး -2Tempo
၄။ဖြစ်လား - One Way
၅။ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင် - DNA
၆။လူငယ် - One Way
၁။အရှုံး - Crab Feat အိမြန်
၂။အဆုံးအဖြတ် - ရတနာမိုင် Vs ကျော်ဇေယျ
၄။နေ့စွဲများ - မြင့်မြတ် Feat ဆောင်းနှင်းကို
၅။သီချင်းရေးဖြစ်တဲ့ည -2Tampo
၆။ဖြစ်ရပ်မှန် - စိုးထက် Vs ညီညီ
Ve Ve 20th Anniversary (Album) 
10:58 AM ဒေါင်းလုပ်သီချင်းမျာ3းcomments
1. ဘာမီတွန် - Shwe Htoo
2. အရက်သမားသစ္စာ - G-Fatt , Ice Cold
3. Do U Love me - လွမ်းပိုင်
4. ဂေါ်တယ် မိုက်တယ်- Sai Sai , Bunny Phyoe
6. အလွမ်းအိမ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
7. Tom & Jerry - ရဲရင့်အောင် , Bobby Soxer
8. အလိုချင်ဆုံးဆန္ဒ - အိချောပို , အိမွန် , သီရိသာ
9. Stay with me - ထွန်းထွန်း , နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
10. အေးဆေးပဲ - စန္ဒီမြင့်လွင်
11. အရှိန်တွေတတ် - Snare , Aung Thu
12. လွမ်းနေရဦးမယ် - နန်းစုဦး
13. အသည်းကွဲ ဧည့်သည် - ဖြိုးပြည့်စုံ
14. သံယောဇဉ်လက်ကျန် - ပိုပို
LUCKY - Bunny Phyoe (Album)
10:56 AM ဒေါင်းလုပ်သီချင်းများ 1 comment
2. ကောက်တေး (Ft - G-Fatt)
3. ဝိတ်မချပါနဲ့ အချစ် (Ft - Sai Sai Kham Leng)
4. လေထဲကအိမ် (Ft - Amera Hpone)
အလွမ်းများဝေးပါစေ - သက်ဆုနဒီ ( Album )
11:02 AM ဒေါင်းလုပ်သီချင်းများ 1 comment
02. မခွဲအတူ Feat; ရွှေထူး
03. Fake Love
04. နင့်လောက်တော့ (Feat ; MHL)
07.စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ (Feat ; G Fatt)
08. အလွမ်းနေ့ (Feat ;ဇမ်နူး Moe Htet)Bone +
09. ချစ်မိတာမှားတယ် (Feat ; Zay Ye)
12. U Don't Know Why (Feat ; Roll One)
14. အတူတူလျှောက်လည်မယ် (Feat ; Oscar Thuya)
16. အလွမ်းများဝေးပါစေ (Feat: Shwe Htoo)
11:00 AM ကဗျာများ 1 comment
#ဝေး 💢ကျနော်က ကောင်းကင်မှာ
သူမက မြင့်မိုရ်နန်း ကတော်ဝင် သဇင်ပါ...။
#အချစ် 💢´ပူလောင်တယ်`တဲ့ ပြောကြတာပါပဲ...၊
တစ်ကယ်ပါ နည်းနည်း တော့ပူတယ်...။
#လွမ်း 💢*စိတ္တဇနာမ်* တဲ့.....
ဘာဘာညာညာ အသေအချာ စ ပြီး သိတော့
#လောဘ 💢တစ်ကယ်ပါဗျာ ကျနော့်စိတ်က
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နည်းနည်း အလိုမကျတော့...၊
တစ်ကယ်တော့ ~အချစ်~ ဆိုတာ......
အကြောင်းအရာလေးတွေပါတဲ့ "စာစု တစ်စု"..။
သူပါရင် ပိုမြိန်တဲ့ ဟင်းကြမ်းတစ်ခွက်....။
ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံခြားသီချင်းMTV တစ်ပုဒ်။
စိတ္တဇ ပန်းချီကား တစ်ချပ်ပါပဲ...။
ဘိုးတော် ဗျူဟာ ( Album )
10:54 AM ဒေါင်းလုပ်သီချင်းများ 1 comment
1 . One Day
2 . တောရွာ (Feat - ကြက်ဖ)
3 .သမီးရည်းစားပြသာနာ (Feat - စုစန္ဒီထွန်း)
4 . ပါကင်ဖောက်ကြစို့
5 . ဆေးပေးမီးယူ (Feat - AP)
6 . မိုက်ခဲ
7 . ရောင်စုံကာလာ (Feat - ရာဇဝင်)
8 . Nightout (Feat - Nine One)
9 . လွတ်(စ်) Feat - နေမဝင်
10.လူတော်လူကောင်း (Feat - ထူးသစ်)
11..ကဲ (Feat - ခင်ဆုရှင်)
13.Everything အေးအေးဆေးဆေး (Feat - နေမဝင်)
Zalo apk နဲ့ဖုန်းဘေရှာနည်း
11:38 AM အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း 1 comment
code = ZJ2736
မသိသေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလုပ်နည်းလေးသိရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
http://zalo.com.mm/eventမှာ apk ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
အကောင့် စဖွင့်တာနဲ့ ၁၅၀ရပါမယ်
နောက်ထပ်ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ထပ်ပေးရင် ၄၅၀ရပါမယ်
11:16 AM အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း2comments
BTC စုနေတဲ့သူတွေတရက်တည်းမရင်းဘဲ များများရနိုင်ပါတယ်
free BTC ကို 0.01ပေးထားပါတယ်
အရမ်းဆော့လို့ကောင်းပီး BTC ရလွယ်တဲ့ ဂိမ်းဆိုက်လေးပါ ကိုယ့်အရင်းထဲကပါအောင်လောဘမကြီးပါနဲ့
သူပေးတဲ့free btcလေးနဲ့ များများထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ
ဖုန်းဘေမကုန်ပဲ auto မိုင်းတူးပေးတဲ့ site
10:54 AM အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း 1 comment
ဖုန်းဘေမကုန်Auto မိုင်းတူးပေးနေတဲ့ site လေး
အောက်က link လေးကနေဝင်
sign up လုပ်
1 GHs free ပေးထားတယ်
Start mining လုပ်
GHs များများရမှ BTC ကို start mining လုပ် ဒါဆို BTC တက်တာမြန်တယ်
Deposit သမားတွေက အချိန်စောင့်စရာမလို
0.0001 BTC ကစပီ လုပ်နိုင်ပါတယ်
0.02 BTC ရရင် ထုတ် ဘာမှလုပ်စရာမလို
bitcoin ရှာနိုင်တဲ့ ဂိမ်း
10:15 AM အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း No comments
အတုံးလေးတွေထပ်ရင်း တစ်နာရီကို satoshi 100000 ထိရနိုင်ပါတယ်။
satoshi 20000 ပြည့်တဲ့အကောင့်တွေဆို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း (မြန်မာစံတော်ချိန် တနင်္လာမနက် ၆ နာရီတိုင်း) wallet ထဲကို auto လွှဲပေးပါတယ်။
အောက်ကလင့်ကနေ apk လေးတွေကို down ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။
9:16 AM ကဗျာများ No comments
မင်းအတွက် တောက်ပတဲ့အလင်း မဖြစ်ချင်နေပါ
9:13 AM ကဗျာများ No comments
11:39 AM ကဗျာများ No comments
ငါ့အား....... ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင်ယံ ၊ ယင်းမှောင်မိုက် အတွင်းမှနေပြီး အနိုင်မခံ ၊ အရှုံးမပေးလိုသော ငါ့စိတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသူ နတ် ၊ သိကြားတို.အား ငါသည် ကျေးဇူးစကားဆိုပါ၏။ လောကဓံတရား၏ လက်ခုပ်တွင်းသို. ဘယ်လိုပင်ကျရောက်စေကာမူ ငါကား မတုန်လှုပ် ၊ မငိုကြွေး ကံတရား၏ ၊ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒဏ်ချက်ကြောင့် ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို.ဖြင့် ရဲရဲနီနေ၏ သို.သော် ညွှတ်ကား ၊ မညွှတ် ။ လောဘ ၊ ဒေါသ တို.၏ ကြီးစိုးရာ ဌာန၏ အခြားမဲ့ကား သေခြင်းတရားသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ငံ့လင့်နေ၏ ။ သို.ပင်မူ ငါ့အား မတုန်မလှုပ်သည်ကိုသာ တွေ.ရအံ့ နောင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက်သည်ကို တွေ.ရပေအံ့
10:41 PM ကဗျာများ No comments
နက္ခတ်လွဲခဲ့တဲ့ ကြယ်နီတွေ ..
ဝူး ဝူး ဝါး ဝါး...
ပျံ့ကြဲ နေတဲ့ ကြယ်မှုန်တွေကိုစုပြီး
ညီမ လေးခေါင်းပေါ် ခရေပန်းကုံးလေး
သီ ပေး မိတယ်..
စင်္ကြာဝဋာ ကျိန်စာ မိပြန်ရော
စုန်း ကိုက်ထားတဲ့ ပန်းသီးတလုံး
အမှောင်ထက် မိုက်တဲ့ ည
တခြမ်း ပဲ့ နေတဲ့ လအက္ခရာ
အပြန် လမ်းလည်း စိုးစိတ်ကြေမွ
ငါ့ က လူရာ မဝင်ဆန့်တဲ့
လုံ လုံ ခြုံ ခြုံ ထုပ်သိမ်း
ချစ်ခြင်းနဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်း နေ့စွဲများ
အိမ်ပြန်တိုင်း သစ်ရွက်ကြွေတဲ့ လမ်း
လွတ်မြောက်ခွင့် ပေးပါ အိမ့်ဖြူ ရယ်...
တကိုယ်စာ တပ်ဆင်မိတဲ့ လွမ်းခြေချင်းစုံမှာ
ပန်းတော ကလေညှင်း တမှုံတာနဲ့
အနာဂတ် ကို ရွက်ချ...
ဘဝရဲ့ လမိုက် ညများစွာ
မိုပြာ(လွင့် ဝေး အိမ်)
ဝေးလို့ မရတဲ့ ချစ်သူများ
10:40 PM ကဗျာများ No comments
အသွေးသား မှာသူ့ စိတ်နဲ့လွမ်း
ငါသတိရတဲ့အချိန်တိုင်း နင်လဲလွမ်းနေမယ်ဆိုတာ ရေမြေခြားနေပေမဲ့ တစ်ယောက်အတွေးထဲကို တစ်ယောက်ကစိုးမိုးထားလေရဲ့
သူ၏ ငါ၏ ခွဲခြားခြင်းသီအိုရီမှာ
တို့အတူတူ ရင်ခုန်သံတွေ နရီမှန်နေသမျှ
ကန္တာရလည်း ပန်းပွင့်စေမည် ။
ငါတို့ရဲ့ သစ္စာနဲ့ ရုန်းထွက် နိုင်ခဲ့တယ်နော် …။
အမြဲတမ်း လှပ နေမှာ ပါ ချစ်သူ။
ခရေပန်းခြောက်လေးကို တယုတယ ထုပ်သိမ်းထားတဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်တယ် မေ..
10:39 PM ကဗျာများ No comments
နုတ်ကတဖွဖွ ရွတ်မိတဲ့ ညတိုင်း
ကိုယ့် အိပ်စက် နိုးထခြင်း...
ကိုယ့် ပင့်သက် လှိုက်မောခြင်း..
ကိုယ့် အိမ့်မက် အရိပ်အရောင်များရဲ့ နတ်မိမယ်
အခန်းနံပါတ် ၁၅၀၀ မှာ..
မေ့ မရလေသော နေ့ည များ...
အလွှာပါးပါး လေး ကာရံထားတဲ့
နှလုံးသား နံရံ အနား
ညစဉ် ညတိုင်း ကြယ်ကြွေပုံပြင်နဲ့
နေမဝင် တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ...
နုတ်ကတဖွဖွ ရွတ်မိတဲ့ ညတိုင်း ကဗျာဆန်နေဆဲပါ။
လွင့် ဝေး အိမ် (မိုးပြာ)
လပ်ကီးမြို့တော်. Powered by Blogger.
andriod ဖုန်းအတွက် လပ်ကီးမြို့တော်
နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
android မိုဘိုင်းနည်းပညာ (213)
Apple (iOS) မိုဘိုင်းနည်းပညာ (74)
Gtalk Custom Message (12)
လပ်ကီးမြို့တော် APK (1)
Email မှ ဖတ်ချင်လျှင် Email လိပ်စာထားခဲ့ပါ
လပ်ကီးမြို့တော် | CREATED BY LUCKY